बिहानै काठमाण्डाैकाे सुन्धाराबाट अायो यस्तो दुःखद खबर – PathivaraOnline
Home > समाचार > बिहानै काठमाण्डाैकाे सुन्धाराबाट अायो यस्तो दुःखद खबर
admin November 30, 2018 समाचार 0
काठमाडौं- सुन्धारामा एक नीजि कारको ठक्करबाट १२ जना घाइते भएका छन्। बा १८ च ४८७३ नम्बरको कारले सडकमा रहेका यात्रुलाई ठक्कर दिँदा ज्ञद्द जना घाइते भएका हुन् । उक्त कारका चालक भेषराज पौडेलले ब्रेक फेल भएर दुर्घटना भएको बताएका छन् । नेपाल एयरलाइन्सको पार्किङबाट बाहिर निस्कने क्रममा कारले ठक्कर दिएको थियो । कारको ठक्करबाट घाइते हुनेहरुमा सन्तोषी नेपाली, फिलिपिन्सका नागरिक केसिया छन् ।
यसै गरि अन्य घाइते हुनेहरूमा जुली बुढाथोकी, गंगामायाँ राई, रुद्रमान पती, प्रज्ञा ज्योति परियार, भावना बोहोरा, मिरा थापा, जोसना ठकुरी, सत्यराज ठकुरी, सृजना पहरी र उर्मीला अधिकारी रहेका छन्। उनीहरुको ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ श्रोत ले जनाएकाे छ।
अोएसनेपालकाे सहयोगमा ।
विश्व सुन्दरी प्रतियोगितामा नेपालकि श्रृङ्खलाले हंगामा मच्चाएका बेला चीनबाट आयो सारा नेपालीलाई खुशीकाे खबर
यिनै हुन् बालक अपहरणपछि हत्या गर्ने महेन्द्र सार्की! यस्तालार्इ कस्तो कारवाही दिने? सेयर गराैं
सिमा लुट्ने मोदी अब कुन मुख देखाउन नेपाल आउला भन्दै सुरेन्द्र केसी जंगिए!अब नेपाली उर्लिने दिन आयो(भिडियो)
दुःखद घटनाः टिपरमा स्कुटर ठो क्किँदा, स्कुटरमा सवार दुई जनाकै निधन